China Turnkey PCB Electronic Assembly Manufacture and Factory |KAISHENG PCB
Ukwaleka ngesinyithi:I-HASL Khokela simahla
Izinto ezisisiseko:Phezulu Tg 170 FR-4
Izinto ezisisiseko: I-Tg ephezulu 170 FR-4 Isiqinisekiso: SGS, ISO, RoHS MOQ: Akukho MOQ
Iintlobo zeSolder: I-RoHS iyahambelana Iinkonzo zokumisa enye: Ukwenziwa kwePCB kunye neNdibano yePCB yeTurnkey Uvavanyo: 100% AOI / X-ray / Uvavanyo olubonakalayo
Amagama angundoqo: INdibano yePCB, ukwenziwa kwePCB, iiMfuno, abavelisi beNdibano yePCB, iNdibano yePCB etshiphuweyo, iiNkampani zeNdibano zeBhodi yeSekethe eprintiweyo
Kwi-PCBFuture, sizama ukusebenzisana kunye nabathengi bethu.Ukusuka kwiprototyping ukuya kwimveliso epheleleyo, sisongezo samandla omthengi.Sihlala siphucula iinkqubo zethu ezisemgangathweni kunye nenkqubo ukuhlangabezana okanye ukudlula iimfuno zabathengi bethu ngokuqhubekayo.
I-PCBFuture izimisele ukuphumeza inkqubo yokulawula umgangatho ukuze iimveliso kunye neenkonzo zayo zihlale zihlangabezana neemfuno zabathengi bethu.
Kutheni iNdibano yethu yePCB kunye nenkonzo yokuvelisa iPCB?
Umgaqo-nkqubo wethu wobulunga kukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye nokulindelweyo ngeXabiso, uMgangatho, ukuhanjiswa kwexesha kunye neNkonzo.
Sixhasa ucaphulo lwe-intanethi lweeyure ezingama-24 kunye nenkonzo engxamisekileyo yeeyure ezili-12 kwiprototype yePCB.Ubungcali kwimveliso ye-PCB enecala elinye, i-PCB enamacala amabini, i-PCB eninzi, i-aluminium PCB kunye ne-flexible PCB.
Sizibophelele ekufezekiseni iimfuno zabathengi bethu abavela kumashishini ahlukeneyo ngokwexesha lomgangatho, ukuhanjiswa, ukuphumelela kweendleko kunye nesisombululo sePCB.Kwakhona bonelela ngenkonzo ekhethekileyo elungiselelweyo.Okokugqibela, PCBFuture lungisa PCB ngokohlahlo lwabiwo-mali lwakho ukugcina ixesha lakho ukuze uwine imarike.
PCB enecala elinye
PCB enamacala amabini
PCB enemigangatho emininzi
Uvavanyo kunye nenkqubo
Ukujika ngokukhawuleza kwindibano yePCB
Izicelo zeeBhodi zeSekethe eziShiciweyo:
1. Ukukhanyisa izicelo
Ii-LED ezine-aluminium-based PCB zinqweneleka kakhulu kwinani lezicelo kunye namashishini.
2. Ii-Electronics zabathengi
Ii-elektroniki zabathengi zizixhobo esizisebenzisa mihla le, njengee-smartphones okanye iikhompyutha.Kwanezona modeli zintsha zeefriji zihlala zibandakanya izinto ze-elektroniki.
3. Izixhobo zonyango
Kwizicelo zonyango, iphakheji encinci iyafuneka ukuhlangabezana neemfuno zobungakanani bokufakelwa okanye ukubeka iliso kwigumbi likaxakeka.Ke ngoko, i-PCB yonyango ithande ukuba yi-PCBs yoqhagamshelo olunoxinaniso oluphezulu, ekwabizwa ngokuba zii-HDI PCBs.I-PCB yonyango isenokwenziwa ngezinto ezisisiseko eziguquguqukayo, evumela i-PCB ukuba iguquke ngexesha lokusetyenziswa, okuyimfuneko kuzo zombini izixhobo zonyango zangaphakathi nangaphandle.
4. Izicelo zoShishino
5. Izicelo zeeMoto
6. Ukusetyenziswa kweAerospace
Izilumkiso zokwenziwa kweebhodi zeesekethe ezikwizinga eliphezulu:
1. Ukulawulwa kwe-impedance kungqongqo, ukulawulwa kobubanzi bomgca wesihlobo kungqongqo kakhulu, kwaye ukunyamezela ngokubanzi malunga ne-2%.
2. Ngenxa yokusetyenziswa kwamacwecwe akhethekileyo, ukunamathela kwe-PTH idiphozithi zethusi akukho phezulu.Ngokubanzi, izixhobo zonyango lweplasma ziyafuneka ukuze urhabaxa umngxunya kunye nomphezulu ukunyusa ukuncamathela kwe-PTH yobhedu kunye ne-inki ye-solder yemaski.
3. Musa ukugaya ipleyiti ngaphambi kokuchasana kwe-welding, ngaphandle koko ukunamathela kuya kuba mbi kakhulu, kwaye kunokugqithwa kuphela nge powder micro-corrosive.
4. Uninzi lwamaphepha zizinto ze-PTFE.Kuya kubakho imiphetho emininzi erhabaxa xa isenziwa ngabasiki besiqhelo abasila, abadinga abasiki abakhethekileyo bokungqusha.
5. Ibhodi yesekethe ephezulu yibhodi yesekethe ekhethekileyo ene-electromagnetic frequency.Ngokuqhelekileyo, i-frequency ephezulu inokuchazwa njenge-frequency ngaphezulu kwe-1 GHz.
Iimpawu zayo ezibonakalayo, ukuchaneka kunye neeparitha zobugcisa zifuna kakhulu.Ihlala isetyenziswa kwi-automobile anti-collision system, inkqubo yesathelayithi, inkqubo yerediyo kunye namanye amabala.
Ngaphambili: INdibano yePcb engundoqo
Okulandelayo: Ngexabiso eliphantsi Turnkey Pcb Assembly
INdibano ye-Electronic Pcb
INdibano yePcb yoMbane
IPcb Electronic Assembly